कोरोनाको दोस्रो लहर खोप नलगाएका भन्दा लगाएका कसरी धेरै सुरक्षित ? - krishipost.com
वरिष्ठ पशु चिकित्सक सेवा निवृत्त प्रमुख, भेटेरिनरी जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं त्रिपुरेश्वर छिमेकी मुलुक चीनको वुहानबाट संसारभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस ९ कोभिड १९० ले विश्वभर त्रासदीपूर्ण वातावरण छाएको छ भने यसका कारण कैयौं अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान, सयौंको सङ्ख्यामा सभा, सेमिनार, सम्मेलन , पर्यटन प्रवर्दन, स्कुल कलेज लगायत व्यापारिक, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावित तुल्याएको छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने हो । यो रोग आनुवांशिक उत्परिवर्तनका कारणले खतरनाक बनेर गएको साथै चमेरो र सर्पको जिन फ्युजनका कारणले भएको बताइन्छ । कोरोना भाइरस अर्थात् कोरोना निमोनिया भाइरस अर्थात् कोभिड १९ को सङ्क्रमण भएको लक्षण सजिलै पत्ता लाग्ने भएकाले आत्तिई हाल्नुपर्ने अवस्था छैन । कोरोना भाइरसको सङ्भएका व्यक्तिमा सिँगान बग्ने कुराको ठीक उल्टो सुख्खा नाक हुने र सुख्खा खोकी लाग्ने हुन्छ । चीनका सेन्जेन हस्पिटलका निर्देशक जेन्सिङ्गका अनुसार वुहानबाट फैलिएको यो कोरोना भाइरस तापक्रम प्रतिरोधी छैन र २७ डिग्री सेल्यिसभन्दा माथिको तापक्रम सहन सक्दैन र मर्छ । त्यसकारण प्रशस्त मात्रामा तातो पानी खानको लागि उनले सुझाव दिएका छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्नका लागि प्रशस्त तातो पानीलगायतका घरेलु औषधिहरू खान पनि उनले सुझाएका छन् ।
लिपस्टिचको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने गर्मी मौसम बढ्दै छ र यो भाइरसको सङ्क्रमण शिथिल बन्दै जाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । सार्स भाइरस पनि महामारीको रूपमा फैलिएको थियो र गर्मी मौसममा हराएर गएको थियो । यो सार्स भाइरस गर्मी मौसममा हराएर जानु अनौठो संयोग मात्र हो कि के हो ? भन्ने द्विविधामा रहेको कुरा मिन्नेसोटा विश्वविद्यालयका सङ्क्रामक रोग र नीति केन्द्रका प्रोफेसर माइकल ओस्टरहोल्मले उल्लेख गरेका छन् । तर, २०१२ मा खाडी मुलुकमा फैलिएको मर्स (Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) भने ४० भन्दा माथिको तापक्रममा फैलिएकोले अरू कोरोना भाइरस जस्तो अवस्था ९उबततभचल० मा नफैलिएको उनले दाबी गरेबाट साँच्चै नै भाइरसहरू यही मौसममा फैलिने वा हराउने भन्ने नहुने रहेछ कोरोना भाइरसका नयाँ प्रकारहरुले महामारीलाई लम्बेतान बनाइरहँदा मानिसहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन्, कोभिड विरुद्धको खोप लगाएकालाई पनि संक्रमण भइरहेको छ भने हामीले किन लगाउनु ? तर संक्रामक रोग विशेषज्ञहरु भन्छन्, ‘खोप लगाएको केही महिनासम्म रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता केही खस्किएजस्तो भएपनि त्यसपछिका दिनहरुमा खोपले प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाएको हुन्छ ।’ हामीहरु नयाँ प्रकारहरुबाट सुरक्षित हुन्छौं, उनीहरुको तर्क छ, अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने र मृत्यु हुने जस्ता जोखिमहरु आउँदैनन् । यद्यपि प्रश्न निकै पेचिलो छ,‘नेपालमा फैलिएको भनिएको भारतीय ‘डबल म्युटेशन’ भेरियन्टविरुद्ध कोरोना खोपले काम गर्छ ?’ युनिभर्सिटी अफ क्यालिफर्निया, सान फ्रान्सिस्कोकी सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञ मोनिका गान्धीका अनुसार खोपले उत्पादन गर्ने इम्युनिटिले हालसम्म विश्वमा थाहा हुन आएका सबै प्रकारका कोभिड ‘भेरियन्ट’ विरुद्ध काम गर्न सक्छ । खोपका क्लिनिकल ट्रायलहरु र खोप लगाएपछि देखिएको संक्रमणको ‘ट्रेण्ड’ हेर्दा खोपले संक्रमणलाई रोक्न सक्ने र संक्रमण भएमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने जोखिमहरु निकै घटाएको देखिन्छ । खोप लगाएकाहरुको मृत्युदर नलगाएकाहरुको भन्दा निकै कम हुने अध्ययनले देखाएका छन ।